ARVI amin'ny fitondrana vohoka
Matetika ny viriosy sy ny aretina bakteria no mahakasika ny vatan'ny olombelona ary ny antony mahatonga ny hatsiaka sy ny fampiroboroboana ny hatsiaka. Ny vehivavy bevohoka koa dia tsy voaaro amin'ny mety hisian'ny hatsiaka. Ny antony mahatonga ny fivoaran'ny ARVI mandritra ny fitondrana vohoka dia fihenam-bidy ara-batana amin'ny tsy fahampiana, satria ny antsanga dia antsasaky ny fampahalalam-baovao hafahafa, ary ny fisian'ny vondron'olona tokony hiady matetika.
ARVI dia vondron'olona marary izay misy fiantraikany amin'ny trakta aretin-tsaina. Ny antony mahatonga ilay aretina dia viriosy sy bakteria. Ny ARVI dia miaraka amin'ny soritr'aretina isan-karazany, toy ny:
fampitomboana ny mari-pana amin'ny tarehimarika ambany indrindra;
niharatsy ny fahasalamako;
fihenam-bidy tsotra amin'ny asa.
Tena mampidi-doza ny marary amin'ny gripa gripa, izay fantatra amin'ny fahasarotany.
SARS amin'ny teny fampiarahana
Ny ARVI mandritra ny fitondrana vohoka ary ny vokatry ny fandefasana ity aretina ity tamin'ny voalohany dia tratry ny loza. Amin'ny trimestre voalohan'ny maha-bevohoka, dia miteraka ny fananganana sy ny fananganana ny taova sy ny rafitra rehetra amin'ny zazakely. Amin'izao vanim-potoana izao, ny foetus dia tena mahatsapa amin'ny vokany, indrindra fa avy amin'ny andanin'ny viriosy. Noho izany, ny vokatry ny viriosy eo amin'ny foetus dia mety hitarika ho amin'ny hadisoana amin'ny fampandrosoana ny rafitra rehetra an'ny zaza ao am-bohoka. Maro ireo hadisoana vokatry ny fihetsika viriosy amin'ny viriosy no mety hahatonga ny firaka tsy ho ela. Fa raha taorian 'ny vehivavy bevohoka iray dia namindra fiantraikany viriosy virtoaly tao anatin' ny trimestre voalohany, ny fitondrana vohoka dia tsy misy ny patolojia, dia misy ny mety hitranga fa ny viriosy na ny bakteria dia tsy misy fiantraikany be loatra amin 'ny fikambanan' ny zaza ho avy.
ARVI amin'ny fitondrana vohoka 2 trimester
Rehefa mitombo ny fitondrana vohoka, dia mitombo sy mihalehibe ny placenta - ny sakana amin'ny fiarovana amin'ny vokatra mahatsiravina. Ny singa iray tsy miova dia tsy tonga amin'ny endri-javatra na ny bakteria. ARVI mandritra ny fitondrana vohoka ary ny vokany amin'ny faharoa fahatelo dia tsy manakiana toy ny tamin'ny voalohany. Raha sendra ny ARVI amin'ny trimestre faharoa, dia misy ny fahafahana mampivelatra ny psykolojian'ny placental, ny fanitsakitsahana ny famatsiana oksizenina ny foetus, izay mety hitarika ho amin'ny hypoxia foetus sy ny fahamendrehany amin'ny ankapobeny.
Ahoana no fomba fitsaboana ARVI amin'ny fitondrana vohoka?
Ny ARVI amin'ny vehivavy bevohoka sy ny fitsaboana azy dia manana endri-javatra maromaro. Amin'ny vehivavy bevohoka dia maro ny fanafody ampiasaina amin'ny fahasalamana iombonana. Ilaina ny fampiasana kely fiomanana, fa tsy ilaina koa ny maka tombotsoa be loatra amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka. Ny fitsaboana ny ARVI mandritra ny fitondrana vohoka dia tokony hanomboka rehefa miseho ny tsy fahampiana kely indrindra, raha ny fahatsiarovany ny fanaraha-maso ny toetry ny hoavin'ny zaza.
Medication during pregnancy in ARVI
Ao amin'ny fitondrana vohoka, amin'ny fanesorana ny aretina, ny hafanana, afaka mampiasa fanafody misy paracetamol ianao. Aza mandray fanafody misy aspirine. Mba hanesorana ny fifindran'ny nosy, mety azo ampiasaina amin'ny fiomanana misy ranon'orana ranomasina mangatsiaka, tsy azo atao izany - ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny hydrochloride oxymetazaline. Ankoatra izany, ny fampiasana antibiotika be dia be dia be amin'ny vehivavy bevohoka, ankoatra ny zava-mahadomelina eo an-toerana. Ny bevohoka amin'ny fihazonana ny tsy fahampian-tsakafo dia afaka mitondra multivitamins, mba hampihenana ny soritr'aretin'ny tosi-drà - misotro divay maromaro , mors, compotes. Ho an'ny fanadiovana ny lava-pofona, ny famarotana ny kamomile sy ny sage dia hifanaraka, fa ny fanesorana ny kalendrie dia tsy hanao. Boka mitaiza amin'ny alina koa dia hanampy ny vehivavy bevohoka vehivavy iray no sitrana haingana.
Noho izany, mandritra ny fitondrana vohoka sy ny fitsaboana azy, ny otrikaretina viraty viriosy dia mila fanairana bebe kokoa avy amin'ny vehivavy bevohoka sy ny dokotera, satria mety hisy fiantraikany amin'ny fampivoarana ny hoavin'ny zaza ny fiantraikany.
Fisorohana ny aretin'ny taovam-pisefoana amin'ny fitondrana vohoka
Mba hisorohana ny ARVI mandritra ny fitondrana vohoka, dia afaka mampiasa menaka oksika ianao, mankany amin'ny toerana feno olona. Azonao atao ny mihazona ny hery fanefitrao amin'ny vitamina, sakafo voalanjalanja. Ny fampitandremana ny hypothermie koa dia manampy ny vehivavy bevohoka hijanona ho salama.
Dufalac nandritra ny fitondrana vohoka
Inona no antibiotika misy amin'ny vehivavy bevohoka?
Nazivin nandritra ny fitondrana vohoka
Herinandro 14 isaky ny fitondrana vohoka - fahatsapana
HCG miaraka amin'ny fitondrana vohoka
Afaka mahazo ny bevohoka any Derinat ve aho?
Ny progesterone amin'ny maha-bevohoka dia mahazatra mandritra ny herinandro (latabatra)
Katsaka - votoatin'ny kaloria
T-shirt mitazona ny vehivavy
Ireo toetra lehiben'ny mpitarika vehivavy
Chloe Kardashian dia nampiseho ny akanjo fanatanjahan-tena
Andraikitry ny Andriamanitra
Taranaka Flax - fampiharana
Ahoana ny fomba hanamboarana croutons amin'ny atody sy ronono?
Trano fandriana amin'ny fandriana iray
Inona ny hafanana ara-dalàna amin'ny alika - ny tena antony mahatonga ny fivilian-tsasatra amin'ny fitsipika
Nahoana ny tanora no mandao ny trano?
Tena ilaina ny kafe?